I-45KGS Baling Wire, China 45KGS Baling Wire Manufacturers, abahlinzeki, Ifektri - Ningbo Judin Special Monofilament Co., Ltd
Ikhaya>Imikhiqizo>Intambo yePlastic Baling
I-45KGS Baling Wire
Ubude ngekhoyili: 2500 m
Isisindo ngemitha: 0.018 kg
Ubukhulu beRoll: φ 550x 270mm
Ikhefu lokuqina ngamabili: 5000 N
Ikhefu eliqinile emjikelezweni onamafindo: 4800 N.
Ukunwebeka ngesikhathi sekhefu ebangeni elilodwa: 15%
Ukunwebeka ngesikhathi sekhefu nefindo: 9%
I-RDF, noma i-Reuse Derives Fuel, isebenzisa ubuchwepheshe obukhiqiza amandla kusuka kudoti ongakulungele ukusetshenziswa kabusha kwendabuko. Ngokubona isidingo socingo lokulinganisa olufanele i-RDF, sathuthukisa umkhiqizo ofanele ukuchibiyela imfucuza ngezinhloso zokushiswa.
Lapho kubhaliswa futhi kuboshwe imfucumfucu eqinile yokushiswa, intambo yendabuko yensimbi kufanele isuswe ngaphambi kokuba kuqale inqubo yokushisa. Lokhu kudinga abasebenzi abaningi futhi kuyabiza.
I-JUDIN Plastic Wire yethu entsha esungulwe yenziwa nguJudin ingashiswa ngesikhathi senqubo yokushiswa komlilo ihlinzeka ngenani lekhalori.
Ubude ngekhoyili ngayinye: 2500 m
Isisindo ngemitha ngayinye: 0.018 kg
Ukulinganisa Roll: φ 550 x 270mm
Ikhefu lokuqina ngesinye ubude: 5000 N
Ikhefu eliqinile emjikelezweni onamafindo: 4800 N
Ukunwebeka ngesikhathi sekhefu kubude obulodwa: 15%
Amabhali angalayishwa kumathambo asongwe ngokuphelele ngaphandle kokungenelela okuzokonga kakhulu isikhathi nemali ngokwenza ngcono uhlelo lokucubungula.
Kunikezwe ngama-reels angu-2500 Meter, anesisindo esingu-45 kg kuphela, okulingana cishe no-145 kg wensimbi yensimbi. Ngakho-ke lapho ifakwa ku-RDF / SRF Baler amafreyimu okuphathelene nokuphathelene (atholakala uku-oda) ukuphathwa nokongiwa kwabasebenzi okuthathwe ukushintshanisa ama-Reels kuncishiswe kakhulu, okuwinzuzo kuma-opharetha.
I-Reel ngayinye ngokujwayelekile izokhiqiza amabhele angu-530 (ngokuya ngosayizi we-bale ka-1.2m X 1m X 1m) futhi izokonga isikhathi esiningi semisebenzi. I-Judin Plastic Wire inobunzima bokubhodloza obulingana nocingo lwensimbi oluqinile futhi luzinzile / luqinile ekusetshenzisweni.
Ukusetshenziswa kwe-JUDIN Plastic Wire kuzichitha izinhlawulo manje ezikhokhiswa iningi labafudumezi be-EU ukuthola intambo yensimbi esithandweni sabo, kuze kube manje ikhiqiza ukonga izindleko.
Amaklayenti asebenzisa i-JUDIN Plastic Wire azovula ezinye izindawo / amathuba okucubungula izinto zawo.
Umugqa wekhwalithi ephezulu we-Star Trimmer we-strimmer
Izingxenye zePlastiki zeFilidi lePolyester Wire Greenhouse